အရောင်းအစီအစဉ် | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > အရောင်းအစီအစဉ်
အဆိုပါကော်​​ပိုရေးရှင်းအသိုင်းအဝိုင်းကစီးပွားရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအကြောင်းပြောနေတာအတွက်ကွဲပြားခြားနားတဲ့အသုံးအနှုန်းများကိုအသုံးပြု - စီးပွားရေးမဟာဗျူဟာ, အရောင်းစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, စျေးကွက်ဗျူဟာ, စီးပွားရေးအစီအစဉ်များကို, နှင့်စျေးကွက်အစီအစဉ်များ. သို့သော်ဤဝေါဟာရများကိုအသံအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောသို့မဟုတ်စာလုံးပေါင်း, သူတို့အတူတူအခြေခံမူကိုဖုံးလွှမ်း -- အရောင်းနှင့်ကုမ္ပဏီ၏ရတဲ့တိုးတက်လာဖို့ကိုဘယ်လို "အပြင်မှာ". အကျိုးရှိစွာစီးပွားရေးအစီအစဉ်များနှင့်စျေးကွက်အစီအစဉ်များအားကြီးသောရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, လူအပေါင်းတို့၏အများဆုံး, လက်တွေ့ကျကျ. ဒီအတိုင်းတော့, တစ်ဦးအကျိုးရှိစွာစီးပွားရေးအစီအစဉ်ကို seve စဉ်းစား ...
ကျွန်မနေအိမ်မေမေအဝန်းမှာလုပ်ငန်းခွင်အတွက်အာရုံစိုက်သတင်းစကားများ၏ဘုရင်မကြီးပေါ့. ငါသည်သင်တို့ကိုတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောဝင်ငွေအတွက်အချိန်စမ်းသပ်မှုရှောက်သွားနှင့်ငါသက်ရောက်စေမည်တဲ့အိမ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးဆဲသို့မဟုတ်ကြီးထွားလာနေတဲ့အခါတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာအာရုံရှိသည်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ယုံကြည်. ကတိုက်ရိုက်အရောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှကြွလာသောအခါဤသည်အထူးသဖြင့်မှန်. သငျသညျထိုကဲ့သို့သောသူ Mary Kay အဖြစ်တိုက်ရိုက်အရောင်းကုမ္ပဏီ join ဖို့ရွေးချယ်ပါတယ် အကယ်., ကာမဂုဏ်စားဖိုမှူးသို့မဟုတ်ဗ Sophia သင်သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်း atte အပေါငျးတို့သကိုစောင့်ရှောက်လျှင်သင်အောင်မြင်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိကိုတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ် ...
Do you ever try to predict the future? Are you usually right, or wrong? ဒါကြောင့် အကယ်., then read on. Can you predict the future of your industry? Can you predict the future of your business? No one can say with certainty what will happen next week much less one year from now. And five years? Notachance. Yogi Berra reportedly said, "It's hard to make predictions, especially about the future." Everyone agrees. Predicting the future is hard. It is so hard thatafifty percen...
သင်ကကြိုးကိုင်သူ Group မှကို Join ရမည်အဘယ်ကြောင့်
Buyer’s Guide: CCTV, ဗီဒီယိုကို Surveillance, နှင့်လုံခြုံရေးကင်မရာများကို
ဒါဟာသနျးသောသူတို့အားသနျး Make အဘယျသို့ရှိနသေ?
တစ်ဦးက New ယောဘသည်နှင့်အတူတစ်ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်လာခြင်း
တစ်ဦးက သာ. ကောင်း၏အင်ဂျင်နီယာကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းသည်ခြောက်လသိကောင်းစရာများ
'' Shift’ Times သတင်းစာကောင်းမွန်သောသို့မဟုတ်မကောင်းပါအတွက်ကိုသင်ကူညီပါရန်
အကြီးစားဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းခုနှစ်တွင် Capital ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ခြင်း
Project မှစီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ဝဲ: အဘယ်အရာကိုဒါဟာပေးနိုငျ
ရုပ်ရှင်အပေါ်အဆိုတော်များအတ္ထုပ္ပတ္တိ: Visual အဆိုတော်များအကြောင်းကိုထိပ်ဆုံးရုပ်ရှင်များ